JLPT တွင် အဆင့်ငါးဆင့် ပါဝင်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိ စာမေးပွဲကို အဆင့်လေးဆင့်ဖြင့်သာ ကျင်းပခဲ့သည်။ လေးအဆင့်သည် အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်သည်။ အဆင့်တစ်သည် အမြင့်ဆုံး ဖြစ်သည်။ JLPT ၏ အသိအမှတ်ပြု အောင်လက်မှတ်သည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် အချိန်ပေါ်မူတည်ကာ တရားမဝင်ဖြစ်ခြင်းတို့ မရှိပေ။
ဆေးပညာနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလုပ်ကိုင်သည့် သူများသည် N1 အရည်အရချင်း ရှိရန် လိုအပ်သည်။ ထို့ပြင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ခွင့်ပြုသည့်လိုင်စင်ရရန် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် လိုအပ်သည်။ ထို့ပြင် သူနာပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကျောင်းများတက်ရောက်မည့် နိုင်ငံခြားသားများသည်လည်း စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် လိုအပ်သည်။
ယခင်ကျင်းပခဲ့သည့် ပုံစံ (၁၉၈၄ − ၂၀၀၉)[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ 2009年度1回日本語能力試験実施状況 Archived 21 July 2021 at the Wayback Machine. JEES. Retrieved5March 2010.
↑ 2009年度2回日本語能力試験実施状況 Archived 29 October 2019 at the Wayback Machine. JEES. Retrieved5March 2010.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျပန်ဘာသာစကားအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ&oldid=720274" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။